dia rivotra creek casino wetumpka misokatra amin'izao fotoana izao
afaka ny miloka amin'ny 0 sy 00 amin'ny roulette
Ny Filankevi-Pitantanana noho ny lalao an-tserasera mpandraharaha France-Pari nihaona tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity mba hanaiky ny Orinasa ara-bola ny fanambarana nandritra ny enim-bolana izay nifarana tamin'ny 30 jona 2011.
France-Pari dia nitatitra betting tsatòka ny €1.5 metatra ny telovolana faharoan'ny taona 2011, niteraka lehibe lalao vola miditra €230,000. "Isika dia tena afa-po tamin'ny valim-pifidianana voalaza ao amin'ny tapany voalohany amin'ny 2011, izay tsy manantena ny ho notohanana nandritra ny herintaona." hoy i Jean-Paul Dumortier, ny Orinasa ny Filoha sy ny Lehiben'ny Mpanatanteraka, Manamboninahitra dia rivotra river casino misokatra. "Izy ireo hanamafy ny tetika ny refocusing ny portfolio amin'ny fananana ao Paris sy ny anaty tany manodidina azy.
Ny SAGI izany hoe ny raharaham-barotra azony tamin'ny faramparan'ny 2010 ankehitriny dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny ny fikambanana ary amin'ny farany ny fandaharana, Mediacom 3, izay ny voalohany hery-tsara ny biraon'ny fanofana fananana any Paris faritra, dia efa tanteraka aoka satria ny daty fanaterana." Hafa nisongadina avy amin'ny tatitra ara-bola dia ahitana: ny vola Miditra ho an'ny vanim-potoana ny zava - €25.4 tapitrisa, ny 62.9% avy €15.6 tapitrisa tamin'ny voalohany-ny antsasaky ny taona 2010. Ny fanamafisana ny SAGI izany hoe isaina ho €8.6 tapitrisa ny fitomboana.
Ankoatra izany, Mivaingana net profit nahatratra ny €68.1 tapitrisa, oharina €9.5 tapitrisa tamin'ny voalohany-ny antsasaky ny taona 2010 sy Miverimberina miasa soa nitsangana tamin'ny 69.9% ao amin'ny enim-bolana voalohany 2011 €20.9 tapitrisa avy €12.3 tapitrisa ao amin'ny mialoha-taona ny fe-potoana dia rivotra creek casino wetumpka misokatra amin'izao fotoana izao. France-Pari nanamafy ny tanjona ny tatitra bebe kokoa noho ny €50 tapitrisa dolara eo amin'ny vola miditra tamin'ny 2011 sy ny Orinasa dia nilaza fa mikendry mba bebe kokoa hampihenana ny fahabangana ara-bola ny tahan'ny sy hanohana ny mahafa-po amin'ny vola miditra sy ny vola miditra amin'ny alalan'ny fampisehoana ny faran'ny taona afaka ny ho tonga manan-karena avy poker. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre afaka ny miloka amin'ny 0 sy 00 amin'ny roulette.